Hanery Ny ‘Bilaogy Ara-Politika’ sy ny Tranonkalam-baovao Hisoratra Anarana Amin’ny Fanjakana i Malayzia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2016 10:45 GMT
Bilaogera ao Malayzia miomana amin'ny fisoratana anarana araka ny baikon'ny fanjakana. Sary namboarin'i Kevin Rothrock.
Nanolotra volavolan-dalàna ho an'ny Mpampanoa Lalàna ny Minisiteran'ny Fifandraisana sy ny Mediamarolafy ao Malayzia, izay mitaky ny bilaogy ara-politika sy ny vavahadim-baovao antserasera mba hisoratra anarana any amin'ny governemanta. Nolavin'ny Minisitra Salleh Said Keruak ny filazana fa mitovy amin'ny sivana ilay lalàna, nilaza izy fa natao mba hiarovana ny aterineto ho fitaovana ho an'ny fampiroboroboana ny fampandrosoana ara-toekarena ao Malayzia ny tolo-dalàna, ary natao hiarovana ny firenena manoloana ny fizarazarana anatiny ateraky ny vaovao diso mivoaka amin'ny aterineto, hoy izy.
Niampanga ny tolo-kevitra ho famerana ny fahalalahana maneho hevitra ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpiaro ny fahalalahan'ny media, milaza fa mamadika ny fampanantenana teo aloha nambaran'ny governemanta fa hampiroborobo ny fahalalahan'ny aterineto ny zava-misy.
Milaza ireo mpitsikera ny antoko politikan'ny fitondrana ao Malayzia fa ny fanerena ny bilaogy ara-politika hisoratra anarana any amin'ny fanjakana dia midika fanampenam-bava ny mpanohitra. Nanomboka tamin'ny taona lasa, niady tamin'ny fanafintohinana kolikoly izay niteraka fihetsiketsehana goavana manerana ny firenena ny governemanta. Ny mpiserasera, anisan'izany ny bilaogera no tena anisan'ireo feo mpitsikera indrindra ny praiminisitra, miampanga azy ho mahazo harena tsy ara-drariny tao anatin'ny varotra marobe mampiahiahy. Efa nanakatona tranonkalam-baovao vitsivitsy ny mpanivan'ny fanjakana noho ny fitateram-baovao momba ny olan'ny kolikoly izay lazaina fa ”tsy voamarina”.
Mampatsiahy ny fanehoan-kevitra vao haingana nataon'ny minisitry ny fifandraisana ireo bilaogera marobe miahiahy momba ny volavolan-dalàna, fanehoan-kevitra izay nilaza fa tombontsoa ny fahalalahan'ny aterineto, fa tsy zo, ary zavatra azon'ny governemanta saronana :
Saika raisina ho toy ny zo ny fahalalahana miteny sy fanehoana ny hevitry ny tena. Ny adinontsika indraindray, na izany aza, dia tsy maintsy raisina ho tombontsoa izany fa zo feno. Ary izany tombontsoa izany, raha ihoarana, dia mety ho esorina indraindray.
Mandritra izany, nampiasa ny diezy #BiarlahBlog (Avelao ny Bilaogy) ny mpitsikera tao amin'ny Twitter, manohitra ny fisoratana anarana tsy maintsy ataon'ny bilaogy ara-politika ao Malayzia. Milaza ireo mpanohitra ny lalàna fa tsy mamaritra ny tena atao hoe “bilaogy ara-politika” ny tolo-kevitra ary mampitandrina fa mety hanimba tanteraka ny fampiasana ny aterineto ao Malayzia ny fameperana ny vaovao. Miantso ny governemanta ny mpisera Twitter mba hamerina handinika indray ny drafitrasany, ka hanatontosa fakàn-kevitra alohan'ny hanitsiana lalina kokoa ny tolo-kevitra.
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo teboka nomarihan'ny mpikatroka, mpanao gazety, mpisolovava, mpampianatra mikasika ny zavamisy:
Mazava tokoa fa manana olana amin'ny famaritana ny atao hoe “bilaogy” sy ny “votoaty ara-politika” isika. Afaka manenona harato [net] goavana tahaka izao ve ny governemanta?
Manana vaovao momba ny vorona ny bilaogiko. Vorona any an'ala. Ala nokapaina. Manohitra izahay. Ara-politika ny bilaogiko mpiresaka vorona.
Hanery ny fanesorana ny fanafenana anarana – fanalahidin'ny fanehoan-kevitra, indrindra ny vondrom-piarahamonina marefo ny fisoratana anarana, Fanitsakitsahan-dalàna goavana.
Tsy mahatakatra ny fahavononana ny #BiarlahBlog. Azo antoka fa manana lalàna miaro amin'ny fanalam-baraka sns isika. toa misy antony ara-politika.
Efa manana fitsipika mipetraka mifehy ny “fikomiana” sy ny fanalam-baraka isika koa nahoana no mbola manampy zavatra bebe kokoa itsambikinana ihany?
Tokony mifantoka amin'ny fahaiza-mitantanana ny governemanta, fa tsy any amin'ny bilaogy ara-politika, [sy] tranonkala mitsikera azy ireo.
Ahoana ny fomba andrisihako ny mpianatro mba hanoratra raha arahi-maso tsirairay ny isan-teny?
Mety hiteraka fanakatonana tranonkala ny teny tsotra raha manjaka ny fisoratana anaran'ny bilaogy ara-politika. Mitombo ny fanafoanana ny fahavalo tsy azo ekena.